Tire Bead Seats Factory, Suppliers |China Tire Bead Seat Manufacturers
● TaiBead Seating Toolkuputika mhepo kubva mutangi pakarepo kunoisa matayi pamarimu.Chigadzirwa chacho chakakodzera michina yekurima, marori, motokari uye midhudhudhu.
● Chishandiso chakakosha chesekishopu yematai.Ivhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavha rinotonga kudzvanywa kwetangi uye gauji yakavakirwa mukati inoratidza kudzvanywa kwetayi.
● Mubato unoita kuti zvive nyore kubata inflator nechekumucheto uye unogonesa kubata zvakanaka kwemudziyo.
● Marita maviriBead Seating Tooline tangi yakasimba, yese-simbi, yakavharwa neupfu yakasimba uye yakasimba zvekuti irambe ichibatsira kwenguva refu.Exquisite poda coating inoita kuti isaita ngura nekuora.
● Pashure pokunge wanyatsopinza chubhu yehigh pressure mumukana uri pakati pevhiri nerimu uye wokurumidza kutendeudzira vharuvhu kuti IVIRIRE, uchapedza nguva pfupi uchifemeredza vhiri uye wozodzima vharuvhu.
● Motokari dzakasiyana dzinoda kushandiswa kwakasiyana-siyana.Iyo geji inogona kukubatsira kuverenga nemazvo uye kuseta kudzvanywa kwemota dzakasiyana.Kumanikidzwa kwe inflator yedu iri pakati pe87-116 PSI.
● Muromo wakanyatsogadzirwa unobata tambo yeshinda pakona yakakwana yekufambisa mhepo panguva yekugara kwebead, ukuwo vharafu inoburitsa nekukurumidza ichiparadzira mweya kuburitsa mweya wakazara muvhiri.
● The high pressure air inflator inokodzera mota, mota, marori, lawn tirakita, matirakita, matirakita makuru, maRV, maATV nezvimwe.Izvo zvakare zvakakunakira iwe kuti uitore nemubato.
5 Gallon Air Tire Bead Seter
● The5 galoni air tire bead seatinokodzera mota, mota, marori, lawn tirakita, matirakita, matirakita mahombe, maRV, All-Terrain Vehicles, etc. Mubato wacho wakanakirawo kuti utore.
● Chigadziko chinoputika mweya wakadzvanyirirwa pakati pevhiri nebhidhi remavhiri;inokodzera nzira dzakadzikama uye dzakachinjika dzekuputika;kana vhiri raputika, mupendero webhoro unogara pamucheto wevhiri kuti uwane yakakwana 40 degree angle.
● Zadza tangi yemhepo neyakajairwa workshop compressor;yedu vhiri bead seater inokwanisa kugadzirisa matayi kubva madiki 4 ″ matayi kusvika makuru 24-1/2 ″ matai erori.
● Batanidza kaviri musoro air chuck kuvharuvhu kuti ushandure iyi pneumatic tire bead blaster kuita chinotakurika chevhiri;iyo yakanyanya kudzvinyirira yemhepo yemhepo tank ndeye 150 PSI, iyo inogona kushandiswa kuseta iyo yakanyanya kudzvanywa chigaro chevhiri bead.
● Hapana chikonzero chekushandisa sipo, tambo dzeratchet uye zvinwiwa kugadzirisa matai;iyi tirairi inorova seater yakanakira DIY kushandiswa mumotokari yako kana RV;mubato uri nyore kutakura wetangi wakanakira basa reunyanzvi rakatenderedza maworkshop akabatikana.